01 | August | 2012 | Dr Ko Ko Gyi's Blog
The sheer hypocrisy of Aung San Suu Kyi
Source: The sheer hypocrisy of Aung San Suu Kyi. From Gulf NEws Published: 20:00 July 31, 2012
Let the voice that champions the causes of human rights and democracy oppose the massacres of hapless Rohingyas
As the Muslim world is stunned by the horrific news of Muslims being slaughtered in Myanmar, the country’s leading politician andasupposed human rights defender, Aung San Suu Kyi, has chosen not to see evil.
Source: MMSY- ဓားစာခံဖြစ်သွားတဲ့ ရခိုင်ပြည် By L. နေတောင်
အခုရခိုင်ပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ အရေးအခင်းကို အစအဆုံးစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ မြန်မာပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ ကောက်ချက်ဒီလိုချပါတယ်။ အရင် ကတော့ ရခိုင်တွေဟာ ရိုဟင်ဂျာမုန်းတိုင်း မြန်မာတပြည်ကို ပြသနာတွေခေါ် သွင်းလာတယ်လို့မြင်မိပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ အပါတ်က စတဲ့ အဖြစ်အပျက် တွေ ကြည့်ပြီး ဗြောင်းပြန်မြင်တယ်။ ပြည်မက လူတွေမက်တဲ့ အမိနိုင်ငံတော်ကြီးဆိုတဲ့ အိမ်မက်အတွက် ရခိုင်ပြည်က သွေးနဲ့သိက္ခာနဲ့ ရင်းပြီး ပေးဆပ်လိုက် ရတာလို့ ။
အခုဆိုရင် ပြည်တွင်းမြန်မာသတင်းဌာနတွေက ဘယ်လောက်ပဲ တဖက်သတ် ရခိုင်ဖက်လိုက်ပြီး သတင်းရေးရေး နိုင်ငံတကာမှာ ရခိုင်တွေက သိက္ခာ ကျသထက်ကျသွားပြီ။ အရင်တုန်းက အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ် ပြင်းထန်တယ်လို့ပဲ သိကြတယ်၊ အခုတတော့ လူမျိုးဘာသာအစွန်းရောက် (racist) တွေလို့ အခေါ်ခံကြရပြီ။ ရခိုင်ပြည်သူတွေလဲ သေတဲ့လူသေ၊ အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်လို့ ဖြစ်၊ မိသားစုတွေဆုံးရှုံးက၊ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးကြ။
ရိုဟင်ဂျာများ ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခံနေရကြောင်း လူ့အခွင့်ရေးအဖွဲ့ကြေညာ
ရိုဟင်ဂျာများ ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခံနေရကြောင်း လူ့အခွင့်ရေးအဖွဲ့ကြေညာ washingtonpost
မြန်မာပြည်အနောက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်၌ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူမျိုးရေးပဋိပက္ခများကြောင့် အစိုးရမှ အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာပြီး တစ်လခွဲအကြာတွင်မူ အုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်မှုများ တအုံနွေးနွေးဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် မြန်မာမွတ်စလင်ရိုဟင်ဂျာများအား ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်မှုများ၊ မုဒိန်းမှုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုများ ဆက်လက်တိုးပွားလျက်ရှိကြောင်း နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်ရေးအဖွဲ့(Amnesty International)က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပြောဆို လိုက်သည်။ (more…)
Rohingya Muslims “persecuted” after Myanmar crackdown says report
Rohingya people living in Thailand hold posters and signs as they protest in front of Myanmar’s embassy in Bangkok, during Myanmar’s President Thein Sein visit to Thailand in this July 23, 2012 photo. — Reuters pic
Source: Rohingya Muslims “persecuted” after Myanmar crackdown says report
BANGKOK, Aug 1 — Myanmar security forces killed, raped or carried out mass arrests of Rohingya Muslims after deadly sectarian riots in the northeast in June,arights group said today, adding the authorities had done little to prevent the initial unrest.
Tags:Bangladesh, Burma, Myanmar, Rakhine, Rakhine State, Rohingya, Rohingya people, Thein Sein
Whit cardရှိသော ဘင်္ဂလီများအား မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူနိုင်ကြောင်း လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀န်ကြီးပြော
Whit cardရှိသော ဘင်္ဂလီများအား မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူနိုင်ကြောင်း လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀န်ကြီးပြော – ၀င့်သင်ဇာကျော်(မြစ်မခ)
by Myit Makha Mediagroup on 30 Jul, 2012
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူဝင်မူကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၁၉၈၂ခုနှစ်မတိုင်မီ ထုတ်ပေးခဲ့သည် ယာယီသက်သေခံ ကဒ်ပြား(whit card)ရှိသော ဘင်္ဂလီများအား မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူနိုင်ကြောင်း လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀န်ကြီးထံမှ သိရှိရသည်။
“၁၉၈၂ခုနှစ် မတိုင်ခင်က ယာယီသက်သေခံကဒ်ပြား အများခေါ်တဲ့ white card ပေးထားတယ်။ အဲ့ဒါကဒ်သူတို့မှာရှိသေးရင် သူတို့မှာ နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်လို့ရတဲ့ အခွင့်အရေးရှိတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ကလဲ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်ဆိုရင်” ဟုလူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ပြောသည်။
(၁၈၂၃) ခုနှစ် မတိုင်မီ အမိမြန်မာမြေ က ဌာနေ မြန်မာ-မွတ်စလင်များ
ကုန်းဘောင်ခေတ် ဗမာ့ယဉ်ကျေးမှုလက်ရာဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော အမရပူရ ရှိ ဗလီ
Source: (၁၈၂၃) ခုနှစ် မတိုင်မီ အမိမြန်မာမြေ က ဌာနေ မြန်မာ-မွတ်စလင်များ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမိုင်းရာဇ၀င်များကိုလေ့လာကြည့်လျှင်မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ် ၌နေ ထိုင်ကြသော အစ္စ လာမ် ဘာသာဝင် မြန်မာမွတ်ဆလင်များ သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၁၀၀၀) ကျော်၊ (၁၂၀၀) ခန့် လောက်ကစ၍ အစု လိုက်သော် လည်းကောင်း၊အနည်း ငယ် သော် လည်းကောင်း လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၃၀၀) ခန့်အထိ ၀င်ရောက်နေ ထိုင်ခဲ့ကြောင်း သမိုင်း တွင် အထောက်အထားခိုင်လုံစွာ တွေ့ရှိ ရသည်။ (more…)